Jasiiradaha Kolombiya, miyaadan aqoon janooyinkan dalxiis? | Safarka Absolut
Absolut Kolombiya | | Colombia
Ma taqaanaa jasiiradaha Kolombiya? Dhulku wuxuu leeyahay mudnaan weyn waana inuu leeyahay xeebta Badweynta Atlantik iyo Badweynta Baasifigga, wax u oggolaanaya inay ku lahaato dhul mudnaan leh dhulkeenna. Biyahan dushooda jasiirado iyo jasiirado badan oo dalxiisyaashu aad u booqdaan mahadnaqooda dhammaan quruxdooda iyo quruxdooda.
Jasiiradaha Kolombiya ee ku yaal badda Karibiyaanka Badweynta Atlantika aad ayey uga booqasho badan yihiin kuwa Badweynta Baasifigga, laakiin dhammaantood waxay hoy u yihiin hanti dabiici ah iyo qurux aad u weyn oo ay adag tahay in lala simo qaybaha kale ee adduunka.
1 Jasiiradaha ugu muhiimsan ee Kolombiya
1.1 Jasiiradaha Kolombiya ee saaran Badweynta Atlantik
1.1.1 Saint Andrew
1.1.2 Jasiiradaha San Bernardo
1.1.3 Jasiiradaha Rosario
1.2 Jasiiradaha Kolombiya ee Badweynta Baasifigga
1.2.1 Jasiiradda Gorgona
1.2.2 Jasiiradda Malpelo
2 Jasiiradaha ugu wanaagsan Colombia
2.1 San Andrés iyo Providencia
2.2 Jasiiradda Gorgona
2.3 Jasiiradda Fort
2.4 Santa Cruz del Islet
2.5 Jasiiradda Corota
Jasiiradaha ugu muhiimsan ee Kolombiya
Marka xigta waan sharxi doonaa kuwaas oo ah kuwa ugu muhiimsan Jasiiradaha Kolombiya oo waa kuwee kuwa ka jira aaggan Kolombiya ka dibna waxaan kuu sheegi doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan uguna booqashada badan dalxiisayaasha quruxdooda.
Jasiiradaha Kolombiya ee saaran Badweynta Atlantik
Jasiiradahan Kolombiya ayaa ah kuwa ugu caansan dalxiisayaasha uguna caansan dalka Kolombiya. Way is helaan waxay ku taal qiyaastii 740 km waqooyi-galbeed Cartagena de Colombia. Laga soo bilaabo 1991 waxay ka kooban yihiin mid ka mid ah 32 waaxood ee Kolombiya.
San Andrés waa jasiiradda ugu weyn dalka waxaa jira qiyaastii 70.000 oo ku nool dhulkeeda. Waxa kale oo ay leedahay xeebo qurux badan iyo qurux aan caadi ahayn oo ay ugu wacan tahay muuqaalkeeda, oo kumanaan dalxiisayaal ahi sannad walba jacayl u qaadaan.
Jasiiradaha San Bernardo
San Bernardo Archipelago waa koox ka kooban 10 jasiirado yaryar oo xeebeed oo ku yaal Gacanka Morrosquillo. Jasiiradahaas waxaa degan dad yar oo kalluumeysato ah oo halkaas si joogto ah ugu nool, laakiin sanadka oo dhan waxaa soo booqda dalxiisayaal badan oo ku takhasusay quusitaanka iyo cayaaraha biyaha - biyahoodu waa kuwa tan ku habboon.
Jasiiradaha Rosario waxay leeyihiin 27 jasiiradood oo geel ah oo ku yaal meel 35 km koonfur galbeed kaga beegan Cartagena ka yimid Kolombiya, qaar iyaga ka mid ah aad ayey u yar yihiin oo waxay leeyihiin hal guri oo keliya. In kastoo aanan dafiri karin in cida iska leh gurigaas shaki la’aan uu yahay qof nasiib badan.
Jasiiradaha Kolombiya ee Badweynta Baasifigga
Jasiiraddani waxay ku taal meel 160 km u jirta dekedda Buenaventura waxaana loo tixgeliyaa janno yar oo kala duwanaansho ah oo ku taal meel mudnaan u leh cilmi baarista sayniska iyo dhammaan dalxiisayaasha doonaya inay ku raaxaystaan ​​quruxdeeda sannad kasta.
Jasiiraddan waxaa lagu gartaa inay tahay dhagax weyn oo nool oo meel gaar ah u noqday saynisyahannada doonaya inay ka helaan macluumaad cusub oo ku saabsan meeraheenna, iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee adduunka oo dhan, kuwaasoo doonaya inay soo ogaadaan quruxda ku qarsoon biyaheeda.
Jasiiradaha ugu wanaagsan Colombia
Sidaad aragtay, Kolombiya waxaa ka buuxa jasiirado leh geedo timireed ... meelaha ugu caansan adduunka. Socdaalkee ayaa aan jecleyn jasiiradaha wanaagsan? Taasi waa sababta ka hooseysa Waxaan rabaa inaan kaala hadlo qaar ka mid ah jasiiradaha ugu wanaagsan Kolombiya (adoon xaqirayn kuwa kale) si aad ugu darto liiska safaradaada mustaqbalka.
San Andrés iyo Providencia
In kasta oo ay yihiin dhowr jasiiradood, waxay metelaan qurux weyn, waa dahabka Karibiyaanka iyo waxay kudhowyihiin xeebta Nicaragua. San Andrés waa ka horumarsan yahay labada wuxuuna soo jiitaa dalxiisayaal badan iyada oo ay ugu wacan tahay duulimaadyada raqiiska ah, dukaamada bilaa cashuurta ah, hoteelada waaweyn iyo xeebaha quruxda badan.
In Providencia, si kastaba ha noqotee, sidoo kale, waa jawharad dhab ah maadaama ay leedahay xeebo fiican, kala duwanaansho dhaqameed aan caadi ahayn, cunto badan oo wanaagsan iyo muusig si aad waqti fiican ugu hesho. Jasiiraddani waa ku habboon tahay booqashada ... waxaad ku noolaan doontaa khibrad aan caadi ahayn oo ku taal bartamaha janno.
Jasiiradda Gorgona waa jasiirad dib u soo cusbooneysiisay xagga ecotourism-ka waxaadna ogaan kartaa nibiriyada loo yaqaan 'humpback' ee u soo haajira inta u dhexeysa bilaha Juun iyo Sebtember. Waxaad sidoo kale ogaan kartaa hawd cajaa'ib leh, waxaad ku raaxeysan kartaa kala duwanaanshaha kala duwanaanta ee Kolombiya, iwm.
Jasiiraddan waxay ku taal 20 daqiiqo oo doon ah xeebta waaxda Córdoba ee Kolombiya, una dhow xeebta quruxda badan ee magaalada Monitos. Waxay hoy u tahay tiro yar, oo leh xeebo aad u fiican. Isla Fuerte sidoo kale waxay leedahay biyo aad u wanaagsan oo quusidda ah, cuntooyinka badda laga helo oo wanaagsan, iyo hudheelo wanaagsan. iyo hoteelada lagu raaxeysto joogitaanka bartamaha janada. Jasiiraddani waa mid ku habboon in adduunka laga waayo dhawr habeen.
Santa Cruz del Islet
Jasiiraddan waxaa laga yaabaa inay tahay tan ugu dadka badan Dunida, iyadoo qiyaastii 1.200 oo qof ay ku nool yihiin jasiiraddan uu dad sameystay oo u jirta kaliya 0,012 kiiloomitir oo laba jibbaaran, cajiib! Jasiiraddani waxay asal ahaan ka soo jeeddaa warshadaha kalluumeysiga dadka intiisa badanna waxay u shaqeeyaan kalluumeysato ama warshadaha dalxiiska ee jasiiradaha kale ee ku dhow.
In kasta oo aysan ahayn tan ugu caansan ee la booqdo, dadka ku nool halkaas waa saaxiibtinimo waxayna diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan inaad barato jasiiradooda iyo inay ku raaxaystaan ​​dhaqankooda. Haddii aad tahay shandad boorso waa inaad ogaataa inuu jiro hoteel sabeynaya oo hubaal kaamil noqon doona inuu ku noolaado tacabur cusub.
Jasiiraddu waxay leedahay 12 hektar waana meel muqaddas ah oo u gaar ah dhirta iyo doogga. Jasiiradda waxaa lagu ilaaliyaa dhir fara badan oo kuleylaha ah, shimbiraha, cayayaanka… nolosha! Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dib u gurasho ruuxi ah maadaama ay tahay meel muqaddas ah dadka asaliga ah ee Quillasinga. Waxaad doon u raaci kartaa jasiiradda oo aad tallaabo ka qaadi kartaa waddooyinkeeda keydka, adigoo ku raaxeysanaya dabeecadda iyo dhammaan ruuxi ahaan ay ku siineyso. Waa jasiirad ku siin doonta khibrad kale oo aanad waligaa iloobi doonin.
Kuwani waa qaar ka mid ah jasiiradaha ugu caansan ee Kolombiya oo la booqdo Laakiin sidaad u aragtay inay jiraan inbadan oo ka mid ah aagaggan markaa waad booqan kartaa kuwa aad ugu jeceshahay ama aad u malaynayso inaad sida ugu badan u jeceshahay iyada oo ku xidhan hadba dookhaaga iyo danahaagu. Waxa runta ah waa inaad booqato midda aad booqato, waxaa lagugu sixri doonaa qurux aad u badan ... jasiiradahaasina waa janno adduunkeenna ku taal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Jasiiradaha Kolombiya
Karen ku jawaab
Daniel etiven dijo
Iyagu waa kuwa ugu fiican isalas ee Kolombiya
Ku jawaab daniel estiven
Aad baan kuu jeclahay, Gorgon Island, halkii jasiiradaha adduunka oo dhan, taasi waa sababta ay halkaas u joogaan
Waxaan u maleynayaa inay fikrad fiican tahay inaad xiiseyneyso jasiiradaha maxaa yeelay wax badan ayey noogu adeegaan intaan socda. Dufan maxaa yeelay waxaad iga caawisay inaan helo waxa aan u baahanahay
Waxaan u maleynayaa inay fikrad aad u wanaagsan tahay inaad heshay jasiiraddan maxaa yeelay qofku wuxuu tamashle u aadi karaa markaad xor tahay ama markaad dugsiga ka baxdo waxaan jeclahay dhammaan jasiiradaha quruxdooda, quruxdooda dabiiciga ah iyo dhammaan waxyaalaha aadka u quruxda badan in jasiiradaha oo dhan ay tahay sababta aan u jeclahay iyaga
Carlos Andres Pinilla dijo
intaas oo dhan oo foolxumo ah been maleh qurux
Ku jawaab carlos andres pinilla
Ku jawaab shirley
Aleja mar dambe faallo kama bixin doonto dijo
Ujawaab Aleja wax faallo ah kama bixin doono mar dambe
Waxaan ahay hooyo by: carinaaa
Ku jawaab carolinaypao
siertocarolain aad u fiican
chimbo timo leh iyo caveson codkaaga
Jennifer Carrera dijo
Ku jawaab Jennifer Carrera
waad ku mahadsantahay jawaabta super
saray pineres dijo
Kuwani waa jasiiradaha jajajakajakajajaja
Ku jawaab saray piñeres
3 bilood ka hor
Ku jawaab luisa
Camila patricia dijo
Wax badan ayey i caawisay, mahadsanid
Ku jawaab camila patricia
Ilaah muxuu yahay muujinta iyo higgaadinta dadka isticmaala qaarkood !! 🙁
Ku jawaab kathe
WAAN KU RAACSANAHAY RABIGII UGU DANBEEYAY FALANQEYNTA ASS OK
Iga raali noqo, waxaan ku dhex milmay Ereyga
Ku jawaab GORGE
qurux badan dijo
Waxaa loo qoray si qabow, waa higaad run ah, waa maxay musiibo iyo waliba muujinta qaar, oo aan edeb lahayn
Ku jawaab farxad
Waxay ila tahay aniga mid layaab leh, in SANTA CRUZ DEL ISLOTE ay leedahay 1.200 oo qof, samada haddii aan tirin karo guryahooda, taasi maahan xog qaldan?
Tatami Jabbaan: farshaxanka sagxadda dhulka
Astaamaha gargaarka Colombia